Waa maxay POE? La Bixiyay, La Leeyahay, La Shaqeystay ... Oo La Wadaagay ... iyo Warbaahinta La Beddelay | Martech Zone
POE waa koobi saddexda hab ee qaybinta waxyaabaha. Lacag bixin, Lahaansho iyo Warbaahin kasbatay dhamaantood waa istiraatiijiyado wax ku ool ah oo lagu dhisi karo maamulkaaga kuna baahin karo gaadhistaada warbaahinta bulshada.
Mushahar La Siiyo, La Leeyahay, La Kasbaday
Warbaahinta Lacagta Bixisay - waa adeegsiga kanaallada xayeysiinta ah ee lacagta lagu bixiyo si loo wado taraafikada iyo farriinta guud ee sumcadda ee ku jirta waxyaabaha aad ka kooban tahay. Waxaa loo isticmaalaa in lagu abuuro wacyigelin, lagu boodboodo noocyada kale ee warbaahinta iyo in macluumaadkaaga ay u arkaan dhagaystayaasha cusub. Xeeladaha waxaa ka mid ah daabacaadda, raadiyaha, emaylka, mushaarka guji kasta, xayeysiisyada facebook, iyo farriimaha kor loo qaaday. Bixinta saamileyaasha ayaa sidoo kale la siin karaa warbaahinta markii heshiis laga gaaro magdhawga.
Warbaahinta La Leeyahay - waa warbaahin, nuxur iyo aalado ay qayb ahaan ama gebi ahaanba leeyihiin ama ay gacanta ku hayaan meheradda. Doorka ayaa ah in la dejiyo waxa ku jira, la dhiso maamul iyo cilaaqaad, ugu dambeyntiina lagu mashquulo rajada ama macaamilka. Xeeladaha waxaa ka mid ah daabacaadda qoraallada baloogyada, warsaxaafadeedyada, wargeysyada, daraasadaha kiisaska, buugaagta iyo cusboonaysiinta warbaahinta bulshada.
Warbaahinta kasbatay - waa helitaanka tixraacyada iyo maqaallada ku saabsan wadiiqooyinka la aasaasay ee aan lagu helin xayeysiinta - marar badan tani waa tabinta wararka. Ilaha warbaahineed ee kasbaday waxay caadi ahaan horey u leeyihiin awood, darajo iyo ku xirnaanshaha warshad ama mowduuc la siiyay, sidaas darteed helitaanka tixraacyadu waxay gacan ka geysaneysaa sidii loo dhisi lahaa awooddaada oo loo baahin lahaa gaadhistaada. Xeeladaha waxaa ka mid ah xiriirka dadweynaha, raadin dabiici ah, iyo barnaamijyo aan lala bixin oo ku saabsan saameynta warshadaha iyo qorayaasha iyo sidoo kale isku xirka bulshada.
Ka Waran Warbaahinta La Wadaago?
Mararka qaarkood suuqleydu sidoo kale way kala baxaan Warbaahinta La Wadaago si toos ah loola hadlo istaraatiijiyadaha wadista taraafikada iyada oo loo marayo wadaagista warbaahinta bulshada. Tan waxaa lagu waafajin karaa iyada oo loo marayo xayeysiinta warbaahinta bulshada, suuq-geynta saamaynta, ama si fudud loo soo saaro istiraatiijiyado wadaag bulsho. Istaraatijiyadaha warbaahinta la wadaago waxay noqon karaan kuwo isku dhafan oo mushaar ah, la iska leeyahay, iyo kuwo warbaahineed oo la kasbaday oo lagu duubay mid.
Sug… Iyo Warbaahinta Isku Bedelay?
Tani waa istiraatiijiyad sii kordheysa oo loogu talagalay suuqleyda waxyaabaha ku jira. Warbaahinta isku-dhafan ayaa iyaduna ah isku-darka warbaahin mushaar leh, mid leh, iyo mid kasbatay. Tusaale wuxuu noqon karaa qoraalkayga Forbes. Aniga shaqeeyey bar qoraal ah oo leh Golaha Wakaalada Forbes… Waana a bixisay (sanadle ah) barnaamijka. Waa leedahay waxaa qoray Forbes oo leh shaqaale tifaftire iyo dallacsiin ah oo loo xilsaaray hubinta wixii nuxur ah ee la daabacay inuu la kulmayo tilmaamahooda hubinta tayada adag isla markaana si ballaaran loo qaybiyo
POE kuma koobna warbaahinta bulshada
Kani waa macluumaad qurux badan oo ku saabsan POE ka Xafiiska Xayeysiinta Isdhexgalka ee Kanada iyo Kooxda Maskaxda. Waxay si toos ah ugala hadleysaa POE xagal baraha bulshada oo aan aaminsanahay inay xoogaa xaddidan tahay. Suuqgeynta waxyaabaha, xayeysiinta, suuqgeynta raadinta, suuqgeynta mobilada… dhamaan wadiiqooyinka suuq geynta ayaa gabi ahaanba kuxiran istiraatiijiyad warbaahineed oo lacag lasiiyay, ama leh.
Istaraatiijiyaddani waxay gabi ahaanba ballaarin karaan wixii ka dambeeya boqortooyada dhijitaalka ah ee suuq-geynta dhaqanka. Ganacsiyadu waxay dib ugu celinayaan qalabka daabacaadda, tusaale ahaan, kuwa dijitaalka ah. Ganacsiyadu waxay iibsanayaan booska xayeysiiska ee boorarka si ay ugu kaxeeyaan taraafikada degellada internetku leeyahay. Mar labaad O POE waxay udub dhexaad u tahay istiraatiijiyad kasta oo suuq geyn ama lacag bixin ah.
Macluumaadka POE wuxuu kugu dhex socdaa:
Qeexida moodooyinka POE
Tusaalooyinka xeeladaha POE
Sida loo Qorsheeyo istiraatiijiyadaada Poe
Taatikada xeeladaha POE
Istaraatijiyadaha POE Dijital ah ee qalabka oo dhan
Waxyaabaha kaqeybgalka ee ku saabsan Poe
Noocyada Lacag Bixinta, Milkiilaha, iyo Kasbashada Warbaahinta
Cabirka guusha POE
Tags: advertisingwarbaahinta laysku daraykasbadeen warbaahintakasbadeen warbaahinta bulshadaFacebookIAB KanadaXafiiska Xayeysiinta Isdhexgalka ee Kanadasuuqgeynta dabiiciga ahwarbaahintu leedahayleedahay baraha bulshadawarbaahinta lacag la siiyaybixisay baraha bulshadaPoewarbaahinta la wadaagoKooxda BrainStorm